Madaxweyne Trump oo ku hanjabaya xaalad deg deg ah oo uu u adeegsado dhismaha Derbiga – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxweyne Trump oo ku hanjabaya xaalad deg deg ah oo uu u adeegsado dhismaha Derbiga
Hiiraan Xog, Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu ku dhawaaqi doono xaalad deg deg ah, si loo dhiso derbiga xadka ah ee ay la wadaagaan Mexico, iyadoo aan ansixin looga baahneyn xubnaha Koongareyska dalkaasi.
Tallaabadaan ayaa timid ka dib kolkii Mr.Trump uu la kulmay saraakiil ka tirsan xisbiga Dimoqraadiga ah oo diiday ama ku gacanseyray codsiga Madaxweynaha ee la xiriiray in loo ogolaado dhaqaalaha ku baxaya dhismaha derbiga.
Madaxa Aqalka Cad iyo saraakiil ka mid ah Koongereyska ayaa maanta galinka dambe la filayaa in ay mar kale bilaabaan wadahadallo cusub si loo xalliyo xaaladda kacsan.
Mr.Trump ayaa ku adkeysanaya in qeyb ahaan ay xirnaan doonaan shaqada Dowladda inta loo fasaxayo lacagaha shanta Bilyan ah ee uu doonayo in uu ku dhiso derbiga xadka ah.
Illaa 8-boqol oo kun oo shaqaaale Federaal ah ayaan helin wax lacag ah tan iyo 22-kii bishii hore.
Qaramada Midoobay oo Ergay cusub u soo magacaabeyso Soomaaliya